ग्रहको दर्जा गुमाएको ‘यम’बारे रोचक तथ्य | Ratopati
personज्ञानमित्र exploreकाठमाडौं access_timeभदौ ५, २०७५ chat_bubble_outline0
१८ फ्रेबुअरी १९३० देखि २००६ सम्म हाम्रो सौर्यमण्डलमा ९ वटा ग्रह भएको मानिन्थ्यो । यो ९ नम्बरको ग्रह प्लुटो थियो । तर अब यसलाई ग्रहको दर्जाबाट हटाइयो । यसको कारणबारे चर्चा पछि गरौंला, पहिला यसको खोज बारे चर्चा गरांै ।
पृथ्वीबाट अरुण ग्रह अति मद्धिम देखिने भएकाले हाम्रा पुर्खाहरूले यसलाई ग्रह नमानेर टाढाको कुनै तारा मानिरहे । १३ मार्च १७८१ मा सर विलियम हर्सेलले आफ्नो ‘टेलिस्कोप’बाट यसको अध्ययन गर्दा यो हाम्रो सौर्यमण्डलको सातौं ग्रह भएको प्रमाणित भयो ।
खोज अनुसन्धानको अन्त्य हुँदैन भनेझँै अरुणको अध्ययनका क्रममा के पत्ता लाग्यो भने ‘अरुणले गर्ने परिक्रमामा कुनै छिमेकी पिण्डको गुरुत्वाकर्षणले प्रभाव पारिरहेको छ’ । खगोल जगत यस एक्स पिण्डको खोजीमा लाग्यो । अन्ततः २३ सेप्टेम्बर १८४६ मा तीन जना खगोलविद्ले अरुणको छिमेकमा रहेको एक्स पिण्ड पत्ता लगाए र यसलाई नाम दिइयो ‘वरुण’ ।
वरुणबारे थाहा भइसकेपछि र यसको अध्ययन गर्दै जाँदा यसको परिक्रमामा पनि कुनै एक्स पिण्डको प्रभाव देखियो । खगोलशास्त्री यस एक्स पिण्डको खोजीमा जुटे ।
४ फ्रेबुअरी १९०६ मा एउटा गरिब अमेरिकी किसान परिवारमा जन्मेका क्लाइड विलियम टोमबागले २४ वर्षको हुँदा प्लुटोको खोजी गरे ।
सन् १९२९ टोमबागले ‘एरिजोना’को ‘लावेल वेधशाला’मा खगोलशास्त्रीका रूपमा काम गर्न थाले ।
वरुण ग्रहमा कुनै एक्स पिण्डको गुरुत्वाकर्षणको प्रभाव पर्छ भन्ने तथ्य दुईजना खगोलशास्त्री पर्सिभल लाबेल र विलियम पिकरिङले पत्ता लगाइसकेका थिए । टोमबागको काम यस एक्स पिण्डको खोजी गर्नु रहेको थियो ।
रात्रिको अन्धकारमा आकाशको एउटै क्षेत्रमा आफ्नो ‘टेलिस्कोप’बाट अनेकौँ रात्रि निरीक्षण गर्दै अन्ततः १८ फेब्रुअरी १९३० मा टोमबागले एक्स पिन्ड पत्ता लगाए । त्यो पत्ता लगाइएको एक्स पिण्डको नाम प्लुटो राख्नुपर्छ भनी एकजना ११ वर्षीय विद्यार्थी वेनेसिया बर्नेले सुझाएकी थिइन् । टोमबागले आफ्नो जीवनकालमा थुप्रै उल्कापिण्ड र ‘नचिनिएका आकाशीय पिण्ड’को पत्ता लगाए ।
१७ जनवरी १९९७ मा ९० वर्षको आयुमा टोमबागको निधन भयो । निधनपूर्व यिनले एउटा अचम्मको इच्छा व्यक्त गरे, ‘मेरो अस्तुलाई पृथ्वीमा कहिल्यै नफर्किने गरी पृथ्वीबाहिर पठाइयोस् ।’
नासाले उनको इच्छाको सम्मान गर्दै ‘न्यू होराइजन’ अन्तरिक्ष यानबाट उनको अस्तुलाई अनन्त अन्तरिक्षमा पठायो ।
१९ जनवरी २००६ मा उडान भरेको ‘न्यु होराइजन’ ५८५३६ किमि÷घन्टाको गतिले उड्दै १४ जुलाई २०१५ मा प्लुटोको नजिक पुग्यो । २५ अक्टुबर २०१६ सम्म ‘न्यु होराइजन’ले १२५०० किमि माथिबाट प्लुटोको परिक्रमा गरिरह्यो ।
‘न्यु होराइजन’ यानमा टोमबागको अस्तुका साथै उनको परिचय लेखिएको एउटा ‘डिस्क’ राखिएको थियो ।
सो डिस्कमा लेखिएको थियो, ‘प्लुटोका खोजकर्ता, एडल र मुरोनका छोरा, पेट्रिकाका पति, एन्नी र एल्डोनका पिता, एक वैज्ञानिक, शिक्षक र एउटा विश्वासिलो साथी क्लाइड टोमबाग, १९०६–१९९७’ ।
टोमबागको अस्तु र यो परिचय बोकेर ‘न्यु होराइजन’को यात्रा तबसम्म जारी रहनेछ जबसम्म यसको कसैसँग टक्कर हुँदैन । नासाले प्लुटोका खोजकर्ताको अस्तुलाई प्लुटोको नजिकसम्म पु¥याएर भनौँ, दुइटा प्रेमीको (टोमबाग र प्लुटो) मिलन गरायो ।
सन् २००६ मा खगोलविद्हरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले प्लुटोलाई ग्रहको दर्जाबाट खारेज गर्नुका पछाडि महत्वपूर्ण कारण रहेको थिए । प्लुटोको अध्ययन हुँदै जाँदा के थाहा हुन आयो भने, प्लुटोले गर्ने सूर्यको परिक्रमा पथमा सानातिना गरी झण्डै ७० हजार अन्य पिण्ड पनि सूर्यको परिक्रमा गरिरहेका छन् । अब ती सबैलाई (७० हजार) ग्रहको दर्जा दिन सम्भव थिएन । अतएव खगोलविदहरूले कुनै पनि पिण्डलाई ग्रहको दर्जा दिन ३ वटा शर्त पूरा गर्नुपर्ने परिभाषा दिए । एक ः त्यो पिण्डको सूर्यको परिक्रमा गरिरहेको होस्, दुई : त्यो पिण्ड गोलो हुनुपर्ने र तीन ः पिण्डले गर्ने सूर्यको परिक्रमा पथ स्पष्ट होस् ।
प्लुटोले तेस्रो शर्त पूरा गर्न सकेन । यसकारण १३ सेप्टेम्बर २००६ पछि यसलाई ग्रह नभनेर क्षुद्र ग्रह भन्न थालियो ।
खगोलशास्त्रीहरूले प्लुटो जस्तै थुप्रै क्षुद्र ग्रह पत्ता लगाएका छन् । सन् २००५ मा पत्ता लागेको एरिस प्लुटोभन्दा ठूलो छ । हउमेया माकेमाके प्लुटोभन्दा अलिकति साना छन् ।
अब वरुण ग्रह नै सूर्यबाट सबैभन्दा टाढास्थित आठौं नम्बरको ज्ञात ग्रह हो । वरुण पारिको क्षेत्रलाई ‘काइपर क्षेत्र’ भनिन्छ । प्लुटोलगायतका थुप्रै क्षुद्रग्रह यस क्षेत्रमा रहेका छन् । सूर्यदेखि वरुण ग्रहको दूरी ३०.११ एयू (एस्ट्रोनेमिकल युनिट) अर्थात ४ अर्ब ५० करोड ४४ लाख ५६ हजार किमि रहेको छ । वरुण ग्रहभन्दा पारि थप २५ एयू अर्थात ३ अर्ब ७४ करोड किमि पछिको क्षेत्र नै ‘काइपर क्षेत्र’ हो । यस क्षेत्रमा लाखौँ खगोलीय पिण्ड छन् । यी सबै खगोलीय पिण्डलाई ‘वरुण पारिका वस्तु’ भनिन्छ । ‘काइपर क्षेत्र’को विस्तार ३० देखि १५० एयूसम्म रहेको मानिन्छ ।
खगोलविद्हरूले ‘काइपर क्षेत्र’मा रहेको क्षुद्रग्रह एरिसको जानकारी प्राप्त गरेका छन् । एरिसले सूर्यभन्दा ६८ एयू टाढाबाट सूर्यको परिक्रमा गर्छ । यसपछिको ‘काइपर क्षेत्र’ अझैसम्म अज्ञात नै छ । हाम्रो सौर्यमण्डलको सिमाना ‘काइपर क्षेत्र’मा सूर्यदेखि १२२ एयू अर्थात १८ अर्ब २५ करोड १२ लाख किमिसम्म मानिन्छ । यसपछिको ‘काइपर क्षेत्र’देखि ‘इन्टरस्टेलर स्पेस’ प्रारम्भ हुन्छ । मानव निर्मित एउटा मात्र यान ‘भायजर १’ ‘इनन्टरस्टेलर स्पेस’मा पुगेको छ । ‘काइपर क्षेत्र’ सूर्यदेखि १५० एयूसम्मको मानिन्छ । अर्थात २२ अर्ब ४४ करोड किमिसम्मको क्षेत्र ‘काइपर क्षेत्र’को सीमाना हो ।
के तपाईंलाई जान्न मन लागेन ? नासाले पठाएको ‘भायजर(१’ अहिले हामी पृथ्वीवासीभन्दा कति टाढा छ ? झण्डै ६० हजार किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिले उडिरहेको भायजर–१ यो लेख लेखिरहँदाको समय २१ अगस्ट २०१८ को दिउँसो १३ बजेर २० मिनेट जाँदा १४२.३७२२१००८६ एयु टाढा रहेको छ । यस यानले यो दूरी ४० वर्ष ११ महिना १५ दिन १९ घण्टा ५५ मिनेट र केही सेकेण्डमा पूरा गरेको हो । यसको प्रतिसेकेण्ड गति झण्डै १७ किमि रहेको छ । १३ बजेर २० मिनेट जाँदा यो यान पृथ्वीबाट २१३५५८३१५१३ किमि टाढा पुगिसकेको थियो ।
‘काइपर क्षेत्र’को सीमाना पारी जान अझैं यस यानले १०८४४१६८७७ किमिको यात्रा गर्नुपर्छ । १७ किमि प्रति सेकेण्डको गतिले यानलाई यो दूरी पार गर्न अझै झण्डै ७१२ दिनको समय लाग्छ । यस हिसाबले यो यान सन् २०२० को अगस्ट महिनाको पहिलो सातामा ‘काइपर क्षेत्र’ पारीको नाम नभएको क्षेत्रमा प्रवेश गर्छ ।
१५० एयूदेखि २००० एयूसम्मको क्षेत्रको कुनै नाम दिइएको छैन । १२२ एयूपछिको क्षेत्रलाई ‘इन्टरस्टेलर स्पेस’ भन्न थालिन्छ । यस क्षेत्रमा एउटा क्षुद्र ग्रह सेडना खोजिएको छ । सेडना सूर्यबाट ९४०एयू टाढा छ ।
२००० एयूदेखि २०००० एयूसम्मको क्षेत्रलाई परिकल्पनामा आन्तरिक उर्ट बादल क्षेत्र भनिन्छ ।
२०००० एयूदेखि ५००००÷१००००० एयू क्षेत्रलाई परिकल्पनामा बाह्य उर्ट बादल क्षेत्र भनिन्छ । यसपछिको धेरै लामो अज्ञात विस्तृत क्षेत्रपछि ३१५९८४० एयू टाढा प्रोक्सिमा सेन्टुरी तारा (४.२ प्रकाश वर्ष) रहेको छ ।
माथि भनिएझैं १४१ एयू दूरी पार गर्न ‘भायएजर–१’ यानलाई ४० वर्ष ६ महिनाको समय लाग्यो । ‘भायजर–१’ को मार्गमा कुनै बाधा अड्चन नआए ७५००० वर्षमा यो प्रोक्सिमा सेन्टुरी तारामा पुग्छ ।
खोज भएको मिति : १८ फेब्रुअरी, १९३०
खोज कर्ता : क्लाइड विलियम टोमबाग
सूर्यबाट औसत दूरी ः ३९.४८० एयू
सूर्यबाट नजिक हुँदा दूरी ः २९.६५८ एयू (५ सेप्टेम्बर, १९८९)
सूर्यबाट टाढा हुँदा दूरी : ४९.३०५ एयू (फेब्रुअरी २११४)
सूर्यको परिक्रमामा लाग्ने समय : २४८ वर्ष (पृथ्वी वर्ष)
सूर्यको परिक्रमामा औसत गति : ४.६७ किमि÷सेकेन्ड
ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह (चन्द्रमा): ५ वटा
प्लुटोको व्यास ः २३७६ किमि (०.१८६८ पृथ्वी) (०.७४७ चन्द्रमा)
प्लुटोको क्षेत्रफल : १.७७९X१०(७) किमि२ (०.०३५ पृथ्वी)
प्लुटोको आयतन : ७.०५७ X १०(९) किमि३ (०.००६५१ पृथ्वी)
प्लुटोको द्रव्यमान : १.३०३ X १०(२२) किग्रा (०.००२१८ पृथ्वी)
प्लुटोको घनत्व १.८५४ ग्राम/सेमि३
प्लुटोको गुरुत्वाकर्षण : ०.६२० मि÷सेकेन्ड२
पलायन वेग : १.२१२ किमि÷सेकेन्ड
अक्षमा परिक्रमा गर्दा लाग्ने समय ६ दिन, ९ घण्टा, १७ मिनेट, ३६ सेकेन्ड (प्लुटोको एक दिन पृथ्वीका ६ दिनभन्दा बढी हुन्छ ।)
अक्षको परिक्रमामा गति : ४७.१८ किमि/घन्टा
प्लुटोको तापमान : न्यूनतम् तापमान माइनस २४०, मध्यम तापमान माइनस २२९ अधिकतम तापमान माइनस २१८ डिग्री
प्लुटोको वातावरण : नाइट्रोजन, मिथेन र कार्बन मोनो अक्साइडले बनेको हिउँ
प्लुटो र पृथ्वीको औसत दूरीः ३८.४८० एयू
प्लुटो र पृथ्वी नजिक हुँदा : २८.६०९ एयू
प्लुटो र पृथ्वी टाढा हुँदा ः ५१.४७० एयू
सूर्यको प्रकाश प्लुटोमा पुग्न लाग्ने समय : १४४२९ सेकेन्ड देखि २४६५२ सेकेन्ड (२४० मिनेटदेखि ४११ मिनेटसम्म)
प्लुटोबाट पृथ्वीमा प्रकाश आइपुग्न लाग्ने समयः १४३०५ सेकेन्डदेखि २५७३५ सेकेन्ड (२३८ मिनेटदेखि ४२९ मिनेटसम्म)
विज्ञानको आँखाबाट नियाल्दा यस्तो पो रहेछ कोरोनाभाइरसको नालीबेली !
के साँच्चै बाँदर आधुनिक मानिसकाे पुर्खा नै हो त ?
कोरोना महाव्याधि डढेलोझैँ झनै सल्कँदै : कहिले बन्ला औषधी र भ्याक्सिन ?
समुदाय प्रतिरोध : कोरोनाभाइरसविरुद्धको लडाइँमा गर्ला त काम ?
सेनाले ल्यायो ग्वाङ्जाओबाट १५ टन स्वास्थ्य सामग्री